” ရီးရဲမက်ဒရစ် နည်းပြအဖြစ်ကနေ နုတ်ထွက်သွားခဲ့တဲ့ နည်းပြ ဇီဒန်း ယူနိုက်တက် နည်းပြ ဖြစ်လာဘို့. ရေပန်းစား “ – Sport Gaber
” ရီးရဲမက်ဒရစ် နည်းပြအဖြစ်ကနေ နုတ်ထွက်သွားခဲ့တဲ့ နည်းပြ ဇီဒန်း ယူနိုက်တက် နည်းပြ ဖြစ်လာဘို့. ရေပန်းစား “
May 27, 2021 - by Sports Gaber - LeaveaComment
ဇီဒန္း သည္ ရီးရဲမက္ဒရစ္နည္းၿပ ရာထူးကေန မေန႔ညက ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္တဲ့ ဇီဒန္းသည္ လက္ရွိမွာေတာ့ ယူနိုက္တက္ နည္းျပ ျဖစ္လာဘို့. ေရပန္းစားေနတယ္လို့ သိရဘာတယ္ ။
ယခုလအတြင္းမွာပဲ ဇီဒန္း ရာသီကုန္ အသင္းမွ ထြက္ေတာ့မယ္ဆိုတာကို အသင္းသားေတြအား ေျပာျပခဲ့တယ္လို႔ သတင္းေတြ ထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ ASရဲ့ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ဇီဒန္း သည္ အသင္း ဒါရိုက္တာေတြနဲ႔ ကစားသမားေတြကို အသင္းမွ ထြက္ခြာသြားၿပီဆိုတာ အသိေပးခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
ဇီဒန္း သည္ 2016 ခုႏွစ္က ရီးရဲမက္ဒရစ္ အသင္းကို ကိုင္တြယ္ခဲ့ရာမွာ ခ်န္ပီယံလိဂ္ဖလား3ႀကိမ္ ရရွိေအာင္ ကူညီေပးခဲ့ပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ နစ္ရာသီကလည္း လာလီဂါဆုဖလားကို ရရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးခဲ့ေပမဲ့ ယခုႏွစ္ရာသီမွာေတာ့ ဒဏ္ရာျပႆနာေတြနဲ႔ ႐ုန္းကန္ခဲ့ရကာ ဖလားလက္မဲ့ရာသီ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ရပါတယ္။
ခ်န္ပီယံလိဂ္မွာလည္း ဆီမီးဖိုင္နယ္မွာ ခ်ယ္ဆီးကို ရႈံခဲ့သလို စပိန္ ကိုပါဒယ္ေရးမွာလည္း 32 သင္းအဆင့္က ထြက္ခဲ့ရပါတယ္။ ဇီဒန္းရဲ့ ေနရာအတြက္ အယ္လီဂရီနဲ႔ အစားထိုး ခန႔္အပ္မယ္ဆိုၿပီး သတင္းေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ထြက္ေပၚေနပါတယ္။
ဇီဒန်း သည် ရီးရဲမက်ဒရစ်နည်းပြ ရာထူးကနေ မနေ့ညက နုတ်ထွက်သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်တဲ့ ဇီဒန်းသည် လက်ရှိမှာတော့ ယူနိုက်တက် နည်းပြ ဖြစ်လာဘို့. ရေပန်းစားနေတယ်လို့ သိရဘာတယ် ။
ယခုလအတွင်းမှာပဲ ဇီဒန်း ရာသီကုန် အသင်းမှ ထွက်တော့မယ်ဆိုတာကို အသင်းသားတွေအား ပြောပြခဲ့တယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ASရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ ဇီဒန်း သည် အသင်း ဒါရိုက်တာတွေနဲ့ ကစားသမားတွေကို အသင်းမှ ထွက်ခွာသွားပြီဆိုတာ အသိပေးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဇီဒန်း သည် 2016 ခုနှစ်က ရီးရဲမက်ဒရစ် အသင်းကို ကိုင်တွယ်ခဲ့ရာမှာ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား3ကြိမ် ရရှိအောင် ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ နစ်ရာသီကလည်း လာလီဂါဆုဖလားကို ရရှိအောင် စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့ပေမဲ့ ယခုနှစ်ရာသီမှာတော့ ဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့ ရုန်းကန်ခဲ့ရကာ ဖလားလက်မဲ့ရာသီ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။
ချန်ပီယံလိဂ်မှာလည်း ဆီမီးဖိုင်နယ်မှာ ချယ်ဆီးကို ရှုံခဲ့သလို စပိန် ကိုပါဒယ်ရေးမှာလည်း 32 သင်းအဆင့်က ထွက်ခဲ့ရပါတယ်။ ဇီဒန်းရဲ့ နေရာအတွက် အယ်လီဂရီနဲ့ အစားထိုး ခန့်အပ်မယ်ဆိုပြီး သတင်းတွေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။
Previous Article လက်ကော ခြေကောသုံးခဲ့ပြီး ဗီလာရီးရဲလ်ရဲ့သူရဲကောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဂိုးသမားရူလီရဲ့ ထူးခြားတဲ့ ကစားသမားဘဝအကြောင်း
Next Article ကိုယ့်ထက် အားနည်းတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတာကြောင့် အားမငယ်ပါဘူးလို့ ဆိုလာတဲ့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ ညီမဖြစ်သူ မအေးသောင်းရဲ့ အခြေအနေကိုပြောပြလာတဲ့ နှင်းဝတ်ရည်သောင်း